HGH Thailand ahịa ọgwụ - Nkeji edemede na hormone growth
Site HGH Thailand January 10, 2018
HGH (somatotropin) na Thailand
Mmiri hormone (somatotropin) - nke kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-eme egwuregwu, ndị ozubu na ndị njem nleta ndị ọzọ nọ na Thailand, bụ onye na-elekọta ụlọ ọgwụ. Na mbụ, dị ka anabolic, a na-eji somatotropin mee ihe nanị na ịmepụta ahụ, ntuli elu na egwuregwu ndị ọzọ metụtara mmepe ahụ, ugbu a ndị na-eme egwuregwu, ndị na-eme egwuregwu na ndị nnọchianya nke egwuregwu egwuregwu na-eji ya arụ ọrụ karia bodybuilders.
Ngwurugwu ahụ gosipụtara na ọ bụ ezigbo ngwá ọrụ maka inwekwu ntachi obi, nke a gosipụtara na ịgwọ mmerụ ahụ. Ya mere, oke ọgwụ a na-eto eto mgbe nile. Na njedebe, jiri nkà mee ihe a, ị nwere ike ịbawanye ogo nke onye na-eme egwuregwu na-eto eto, nke a dịkwa mkpa ma kwesịkwara ikwu okwu kpọmkwem.
Gini mere aru ji choo hormon (HGH)? Soma pụtara ahu. Ngwurugwu na-egosi inwe "oke ọkụ" - njikọta nke ahụ. N'oge uto nke ahụ, somatotropin bụ isi ihe kpatara ya. Ọganihu nke ahụ na-adabere n'ogo ya, ma ogologo ma obosara. N'ihe dịkwuo mkpa na ahụ, otú ahụ ka mmadụ na-etolite.
Mgbe akụkụ nke cartilaginous na ọkpụkpụ nke ọkpọ ahụ na-emepụta, ọganihu nke ọkpụkpụ na-akwụsị, ruo oge ụfọdụ, ọ ka na-eto eto n'ọkpụkpụ. N'akụkụ ụfọdụ nke ọkpọ ahụ, ọ bụghị ebe a na-eto eto ka a na-etolite. Akụkụ ndị dị otú ahụ na-eto eto na agba, imi, aka na ụkwụ.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na maka ọtụtụ ihe kpatara ya na nwata, ọ
ihe na-eme ka hormone nke na-eto eto mụbaa. Mgbe ahụ, ndị na-eto eto na-eto eto, bụ nke na-ebute elu karịa 2 m. A na-ewere ọnọdụ a dịka ọrịa ma kpọọ ya "gigantism." Otú ọ dị, ọtụtụ ndị nọ na mbara ala anyị ga-enwe obi ụtọ ịghara ịbụ ndị dike, kama ọ bụ ndị dị elu. Ọtụtụ ndị nne na nna chọrọ ịba ụba nke ụmụ ha, ma ugbu a, ọ ga-ekwe omume.
Site n'ụzọ, onye kachasị elu nke bi n'ụwa, nwere mmụba nke 2 m 48 cm (!). Mgbe ụfọdụ, ihe ndị na-emepụta nke hormone nke na-eto eto na-arịwanye elu n'ụzọ dị ịrịba ama na ndị toro eto, mgbe ọtụtụ n'ime ọhịa ndị a na-emepe emechi. N'okwu a, agba mmadụ, imi, aka na ụkwụ na-eto eto. A na-akpọ ọnọdụ a acromegaly, nke ahụ na-abawanye n'akụkụ akụkụ nke ahụ. N'ịbụ onye toro eto na ahụ zuru oke, somatotropin na-arụ ọrụ anabolic.
Ọ bụ ọrụ maka usoro nke njikọ protein na akụkụ na anụ ahụ niile na-enweghị otu. Mmadụ ole na ole maara na HGH tinyere ihe niile bụkwa hormone nchekasị. Na nrụgide, ọbara glucose ọbara na-arịwanye elu, nke a na-enyekwara ahụ aka ime mgbanwe maka ọnọdụ ọjọọ site na ntinye protein protein, nke kachasị na ike nke cell.
Ya mere, ndi mmadu nke nwere iwu siri ike na-enwe ezigbo nkwonkwo n'ozuzu ya bu ihe ngbagwoju anya na ngbanwe nile nke ndu ayi. A na-enyere ha aka na nke a site na somatotropin. Ebe ọ bụ na a naghị emechi akụkụ aka nke eriri ukwu, imi, aka na ụkwụ adịghị, "akụkụ" ndị a na-eto n'oge ndụ. Ma ọbụna mgbe ha mere agadi, ha na-etowanye ntakịrị, n 'nkezi site na 5-8 mm.
Otú ọ dị, ọ dị, na ndị ọzọ ha, onye na ezumike nká, imi na aka na-abanye dị ukwuu, nke na-eje ozi dị ka isiokwu na-adịgide adịgide maka njakịrị. Nnyocha dị ukwuu na Thailand egosiwo na mgbe emechara uto mgbe ọ dị obere, onye ahụ n'oge ndụ ọzọ ka "etolite." Ma uto a dị ntakịrị. Ka ọ na-erule afọ 60, nwoke na-etolite 8-10 mm n'ogologo na otu obosara.
Otú ọ dị, uto a abụghị ihe a na-ahụ anya n'ihi ịkụda ahụ na ịkụda ahụ ike, bụ nke na-abịa n'oge a n'ọtụtụ mmadụ. N'ihi na enweghi uto nke homoni na nwata, ndi mmadu na-eto obere, ha ana-akpokwa ha dwarfs. N'asụsụ nke ndị dọkịta, a na-akpọ ọnọdụ a "nanism nke hypophysia." N'ihe enweghi mpempe nke na-eto eto na onye toro eto na-eto eto, ụdị dystrophy dị iche iche na-etolite, nke mgbe ụfọdụ ọbụna na-agwụ ọnwụ, ma ha dị oke obere. Na ya onwe ya, aha "nanism" a na-atụ aro na a na-emepụta somatotropin na glands.
Kedu ihe na-eme ka ndị mmadụ mara ma ọ bụ ihe niile. Ihe na-eme ka ọkpụkpụ gọọmenti bụ ụbụrụ ụbụrụ ala, ụbụrụ dị na isi ụbụrụ. Mmetụta na ogo nke ntụpọ pituitary dị ka udara. A na-echebe nchebe dị ọcha na ike nke ịdị mfe ịdị nwayọọ ya.
A na - ahụ ya na ọkpụkpụ ọkpụkpụ - ọ bụ "Turkish saddle" na isi okpokoro isi. A na - emepụta homonụ ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na - emepụta - hormone nke na - akpali akpali (na - emetụta gland thyroid gland), adreno corticotropic (na - eme ka mmiri gwụ), gonadotropic (na - eme ka ụmụ nwoke na - enwe mmekọahụ) na ndị ọzọ.
Ọrụ nke pituitary na-achịkwa hypothalamus, mpaghara pụrụ iche nke midbrain. N'ebe ahụ, a na-azụlite liberins na statins. Maka hormone somatotropic, somatoliberin na somatostatin dị mkpa. Somatoliberin hypothalamus na - eme ka ọgwụ nkegrowth hormone na - emepụta site na pituitary gland. Kama nke ahụ, Somatostatin na-egbochi mmepụta nke somatotropin. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmalite ụba hormone na-ahụ n'ahụ, mgbe ahụ, ọ dị mkpa ma ọ bụrụ iji mụbaa somatoliberin, ma ọ bụ iji belata ọnụ ọgụgụ nke somatostatin.
Ruo ogologo oge, a kwenyere na hormone ahụ na-eto eto nwere ikike n'onwe ya na-arụ ọrụ anụ ahụ, cartilage na akụkụ ahụ. Ekem enye ama ọwọrọ ke emi idịghe. HGH nwere ike imetụta mkpụrụ ndụ naanị na vitro na oge 2,000 dị elu karia nyocha. N'ọrụ nkịtị, HGH na-eme naanị na imeju.
Imeju na-emepụta ihe na-akpata insulin, nke a na-akpọkwa somatomedin. Somatomedin - nwekwara mmetụta anabolic na uto, na-emetụta mkpụrụ ndụ ndị a na-atụle. Dịka onye na-agwọ ọrịa, m na-ahụkarị mgbe ọ bụla ọrịa ọrịa imeju siri ike na nwa ahụ na-akwụsị na-eto eto na ọnọdụ yiri nke ahụ pituitary nanism na-eme, ọ bụ ezie na ọrịa dị otú ahụ kpatara kpatara enweghị somatomedine.
N'aka nke ọzọ, acromegaly na-emekarị ka ogo glucose dị n'ọbara. Ọrịa a dị na nke a kpatara ụbụrụ dị elu nke somatomedine n'ime ọbara. N'ikpeazụ, usoro nke usoro anabolism na hormone somatotropic nke a na-etinye aka na akwara skeletal bụ:
Ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe mmetụta anabolic, kwuo, na mkpụrụ ndụ ahụ, anyị nwere ike:
1. Mee ka ọnụ ọgụgụ nke somatoliberin dị na hypothalamus.
2. Belata ego somatostatin.
3. Tinye n'ime STG ahụ.
4. Tinye n'ime ahu somatomedin.
Na nke ọ bụla n'ime okwu ndị a, a ga-arụzu ihe ikpeazụ. Ị nwere ike ịga ma n'akụkụ ụzọ nke iwebata ihe dị mkpa site n'èzí, na n'okporo ụzọ nke na-akpali mmepụta ya site na akụkụ ahụ n'onwe ya. Ị ka nwere ike ịga n'ihu na-eto eto
enwe mmetụta nke mkpụrụ ndụ gaa na nri dị mkpa, mana mkparịta ụka a ka ga-abịa. Ka anyị lebakwuo anya na nchịkọta dum nke usoro iwu somatotropin
ma malite usoro ọgwụgwọ a na somatotropin. E kwuwerị, na akụkọ ihe mere eme, ọ malitere ya. STG bụ hormone peptide. Ọ na-agụnye amino acid ogologo ogologo zuru oke gụnyere 191 amino acid residues. N'ihe dị ka 1921, ndị ọkà mmụta physio na-enyocha ụmụ anụmanụ mere ka ha nwee ihe mgbagwoju anya mgbe ha webatara ihe dị nsị nke mkpuchi azụ nke boro pituitary glands. Dịka anyị nwere ike ịhụ, enwere ike ịbawanye uto nke eto eto eto eto ogologo oge.
A na-akpachara anya somatotropin dị ọcha nke sitere na anụmanụ na 1944, na - na 1956. Ọbụna mgbe ahụ, site n'enyemaka nke STH, a malitere iji ọgwụ na ike na-emeso ndị dwarf ihe ọma dị mma. N'ikpeazụ, a chọpụtara na e nwere ma ọ dịkarịa ala atọ ụdị STH na ọkwa dị iche iche dị na mbara igwe. N'ime ụmụ mmadụ, a na - emepụta STH n'ime sel ndị eosinophilic a na - akpọ gọọmenti pituitary.
Na etuto nke sel eosinophilic, dịka iwu, usoro ahụ nke gigantism na-etolite mgbe uto mmadụ dị ukwuu karịa 2 m. N'oge a nke mmepe nke ọgwụ, a na-agwọta ụbụrụ dị otú ahụ n'ụzọ ọma ma na-arụ ọrụ. Otú ọ dị, ọganihu dị ukwuu na-anọgide. N'etiti ndị egwuregwu basketball na ụwa, e nwere ọtụtụ ndị nwere ịwa ahụ pituitary na nwata ha.
A na-ewepụ eriri ahụ site na imi (!), Onye ahụ na-adị ndụ, dịka à ga-asị na ọ dịbeghị ihe merenụ. Otú ọ dị, e nwere ihe ndị a na-apụghị ime. N'aka nke ọzọ, ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto "toro eto" na-eto eto, nke na-eto eto na-eto eto na-eto eto ka ọ na-eto eto.
The secretion nke uto hormone n'ime ọbara bụ pulsed. N'ụbọchị e nwere, dị ka usoro, 6-9 nnukwu ọnụ ọnụ. Ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ mgbe ụfọdụ ruru 12. Ọnụ elu nke ọnụ ọnụ elu na-abawanye na arụ ọrụ ahụ na n'oge ụra. Mgbe nri, ebe elu nke nkwụsị nke somatotropin, n'ụzọ dị iche, na-ebelata, karịsịa ma ọ bụrụ na nri a bụ carbohydrate.
STG nke umu anumanu nile nwere otu ihe omuma aru. Ngwurugwu umu anu di iche iche na-emeghachi omume na GHG elu, mana STG nke umu obere umu adighi eme ihe di elu. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ STG, na-eme ụdị anụmanụ ọ bụla, ma ọ dịghị nke anụmanụ somatotropin ọ bụla na-eme.
Ndị okenye STG ga-eme ihe na-arịwanye elu nke ụmụ anụmanụ, ma ọ bụghị ụmụ mmadụ. STG nke whale ga-eme ọzọ na ụmụ anụmanụ nke nzukọ dị ala, ma ọ bụghị naanị na mmadụ ma ọ bụ enwe, na ihe ndị ọzọ.